Ethereum na-ahụ mmụba na azụmahịa whale - CoinWorldMap
Ethereum na-ahụ mmụba na azụmahịa whale
Mee 13, 2022 Bitcoin, Ethereum, Wepu
Ethereum gara n'ihu na-ada n'etiti ahịa na-ere ahịa sara mbara, na-atụfu ihe karịrị 57% nke ọnụ ahịa ya ma na-efunahụ 32% n'ime ụbọchị 7 gara aga.
N'oge ederede, akụ nke abụọ kachasị ukwuu nke crypto site na isi ahịa ahịa na-ere ahịa na $ 2079 mgbe ọ kwụsịrị nkwado $ 2000 na mbụ taa ma gbadata 24% n'ime awa 19,98 gara aga.
Na mgbakwunye na nnukwu isi ikuku, ire ere ahụ ka njọ site na nchegbu gbasara stablecoins mgbe ọ gbasịrị. E wepụrụ peg UST, sochiri ụnyaahụ USDT.
Ka o sina dị, ọnụ ahịa na-ada ada yiri ka ọ kpalitere na whale Ethereum: Ọkwa nke ọrụ netwọk bilitere nke ọma n'izu gara aga tupu ịkụ ihe ndekọ dị elu ụnyaahụ.
“Ethereum whale na-arụsi ọrụ ike taa na azụmahịa 2596 ruru $1 nde ma ọ bụ karịa. Nke a bụ ụbọchị kachasị elu nke azụmahịa whale kemgbe Jenụwarị ma kwesịrị ileba anya ka ETH dara n'okpuru $ 2K maka oge mbụ kemgbe July afọ gara aga, "Santiment tweeted na Thursday.
A kọkwara mmụba nke azụmahịa na Curve, mgbanwe mgbanwe nke Ethereum kwadoro. Dị ka usoro tweet sitere na ego Curve, maka ụbọchị nke atọ na-esochi, ọnụ ahịa azụmahịa na netwọk Ethereum karịrị $ 5,8 ijeri, na-edekọ ndekọ maka ọnụ ahịa azụmahịa kachasị elu otu ụbọchị na akụkọ ihe mere eme. Tụkwasị na nke ahụ, ọnụ ọgụgụ nke azụmahịa ndị na-agafe agafe gafere $ 6,8 ijeri.
Ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke azụmahịa gosipụtara na mmụba dị ukwuu na tarifụ gas. Dị ka a na-ahụ na Nansen blockchain analytics platform, nkezi ọnụ ahịa gas na netwọk Ethereum ebiliwo karịa 550 gwei, na Uniswap na AAVE na-agbazinye ego maka oriri gas kacha ukwuu n'etiti nkwekọrịta ndị ọzọ na-eduga.
Ihe omuma a na-abia dika ETH / BTC na-aga n'ihu na-arị elu, na-akụtu elu oge niile n'izu a n'agbanyeghị nrụgide ala nke UST na-agbasa. A na-egosipụtakwa ọkwa dị elu nke ọrụ na Bitcoin, na Santiment na-akọ na Wednesday hụrụ ọkwa kachasị elu nke azụmahịa site na iji adreesị Bitcoin pụrụ iche kemgbe February.
Otú ọ dị, ọ bụ ezie na ọkwa a nke ọrụ ahịa nwere ike ịpụta ọtụtụ ihe ndị ọzọ, gụnyere ndị ahịa na-agbanwe ihe dị iche iche, otu ihe ka doro anya: akụkụ buru ibu nke a bụ ịzụrụ ihe.
Dị ka Carlos Gomez si kwuo, ụdị ọrụ ahịa a nwere ike igosi na ahịa ahụ na-aga ịla azụ. "Nke a na-apụtakarị na nnukwu nnọkọ whale emeela ma nwee ike gosi na ala adịghị anya," Gomez tweeted na Tọzdee.
Agbanyụrụ Terra blockchain ọzọ
Nkwado maka Ethereum bara uru nye onye ọrụ SEC